Fanapahan-kevitra hafahafa: teny malagasy, hoenti-mampianatra hatreo amin’ny ambaratonga fototra | NewsMada
Fanapahan-kevitra hafahafa: teny malagasy, hoenti-mampianatra hatreo amin’ny ambaratonga fototra
Nisy nihaino ihany ireo hevitra natsipy tetsy sy teroa ! Aoka mba ho amin’ny teny malagasy ny teny hoenti-mampianatra ny zaza malagasy. Nivoaka tamina fampahalalam-baovao maro fa hatreo amin’ny taona faha-9 no hanatanterahana izany. Fanapahan-kevitra nanaitra sy nahagaga ary nahatalanjona… Nibosesika indray ny fanontaniana !
Nanomboka tamin’ny nahitana fa tsy nahomby ny fampiharana ny « fanagasiana sadasada » teo amin’ny fampianarana, tsy nitsahatra ny nitady vahaolana ny mpampianatra sy ny mpikaroka maro. Niombonan-kevitra ny hampianarana ny zaza malagasy amin’ny teny malagasy. Teny malagasy no hoenti-mampianatra. Tsy tanteraka anefa izany raha tsy amin’izao fotoana izao, araka ny fanapahan-kevitry minisitera telo (Fanabeazam-pirenena, Fampianarana ambaratonga ambony, Fampianarana teknika).
Hatreo amin’ny ambaratonga fototra, teny hoenti-mampianatra ny teny malagasy. Fa maninona no najanona hatreo amin’ny ambaratonga fototra ? Miofo ka tonga « vazaha » angaha ny zaza malagasy iray rehefa hiditra any amin’ny « lycée » ka tsy hahazo resaka amin’ny teny malagasy ? « Ny olom-pirenena nobeazina tamin’ny teniny no afaka mitondra fampandrosoana ho an’ny taniny ». Odiana tsy fantatra ve io lamina voajanahary ambaran’ny Unesco io ?
Lasa lavitra raha ampianarina amin’ny teniny
Mibosesika, tahaka izany, ny fanontaniana taorian’ity fanapahan-kevitra « hafahafa » ity. Nahoana izy raha notohizana hatrany amin’ny ambaratonga ambony. Tsy misy, na trangan-javatra iray aza, tsy azo hazavaina (io ilay hoe, teny hoenti-mampianatra) amin’ny tenindreny. Lainga sy anisan’ny fitaka natao nandritra ny fanatanterahana ny « fanagasiana sadasada » ny filazana fa « tsy azo gasina ny taranja siantifika ». Tsy ny taranja no tokony ho « gasina » fa ny teny hoenti-mampianatra no atao amin’ny teny malagasy. Ny Sinoa, ampianarina matematika, fizika, sivilizasiona, informatika, sns, amin’ny teny sinoa ka nahoana ny Malagasy no ampianarina ireo amin’ny teny « vazaha » ?… « Paikadim-bazaha no nahatonga an’izany. Lasa lavitra ny firenena iray raha ampianarina amin’ny teniny ny mponina ao aminy », hoy ny mpampianatra iray izay!
Nanao dingana ny tompon’andraikitry ny fampianarana ny amin’ny fampiasana ny teny malagasy ho teny hoenti-mampianatra. Tsara, saingy tsy ampy raha hatreo amin’ny ambaratonga fototra ihany. Raha katsahina tokoa ny fitiavan-tanindrazana, mila tohizana hatrany amin’ny ambaratonga ambony io fanapahan-kevitra io.